Cajiibka Kala Duwan Dhinaca Cinwaanka URL - Hoos u Dhaca Webka iyo Qalabka Macluumaadka
Si aad u isticmaasho URLitor, waxaad u baahan tahay kaliya inaad ku darto liisto dhammaan URL-yada waxyaabaha aad rabto inaad ku xardho internetka ee shebekada la bixiyo. Markaa waxaad ubaahan tahay inaad sheegto halbeegga HTML ee aad rabto inaad ka soo qaadatid bogagga shabakadda oo guji badhanka gudbinta. Waa sida ugu sahlan. Qalabkani, uma baahnid inaad nuqul ka sameyso ama ka dhajiso barta shabakada.
xPath waa luuqad loo isticmaalo in lagu raadiyo xogta faylasha XML. Waxay isticmaashaa tibaaxo gaar ah si ay u doortaan node-yada ama noodarka faylasha XML. Tusaalooyinka ah in XPath ay fahamtahay waxay la mid yihiin kuwa loo isticmaalo faylasha kombiyuutarka caadiga ah ama dukumentiyada.
Inkastoo XPath loo isticmaalo luqado badan oo barnaamijyo ah, qalabkani waxaa loo dhisay dadka aan isticmaalin aqoonta barnaamijka. Sidaa darteed, uma baahnid inaad noqoto barnaamijka si aad u isticmaasho. Iyada oo qalab this, waxaad ka saari kartaa xogta dhowr bog oo HTML iyo XML.
Si fudud loo isticmaalo, dhowr jeer oo loo adeegsado ereyada XPath ayaa horay loo soo saaray liiska hoos-hoosaadka si dadka isticmaala kaliya ay u baahan yihiin inay doortaan midkood oo ku xiran hadafkooda. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala qibrada leh ee XPath waxay xor u yihiin inay isticmaalaan tibaaxahooda caadada mar kasta oo ay doonayaan..
Qalabka waxaa loogu talagalay awoodda 100 URL-yada hal kulan oo qura, oo wuxuu qaadanayaa ugu badnaan 10 jeer isla markiiba. Si kale haddii loo dhigo, waxay xoqin kartaa xogta ugu badnaan 100 URL ah mar.
1. // div  -
Qaar ka mid ah ereyada caadada ee XPath muhiim ah oo la beddeli karo ama lagu dari karo ayaa hoosta ku qeexay:
Tilmaamahani wuxuu dooranayaa qaybta labaad ee rukunka;
2. // link [@ rel = 'canonical'] / @ href - Qormadani waxay doortaa meesha (ref) ee tag ee loo adeegsado dejinta qaamuuska isku midka ah ee loo siman yahay;
3. / html / madax / meta [@ name = 'description'] @ content - Hadalkani waxa loo isticmaalaa xulashada content;
4. // * [class = 'class-name'] - Waxaad isticmaali kartaa ereyadan si aad u dooratid dhammaan walxaha leh 'class-name' sida Fasalka CSS;
5. // h2 | // title - Tilmaamkan waxaa loo isticmaali karaa inuu doorto labada H2 ee hore iyo cinwaanka bogga; (Name)) 'h1' ama magac
= 'magac') - Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa sida kan kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, muujinta kor ku xusan waxay ka fiican tahay maaddaama ay ka gaaban tahay;
7. // * [waxaa ku jira (@class, 'thumb')] - Tilmaame-yaashan wuxuu dooranayaa walxo kasta oo leh fasal CSS oo sidoo kale ku jira 'suulka' si loo soo saaro;
8. // waalid :: * [text
= 'Ku soo dhawow'] - Qeexiddani waxay dooraneysaa waalidka wax walbo oo leh qoraalka 'Welcome ';
Qalabkani waa nooc beta ah oo wali la shaqeyn kara qaladaad qaar. Si kastaba ha ahaatee, wali waa qalab weyn oo loogu talagalay dadka isticmaala aqoonta yar ee barnaamijka ama barnaamijka maadaama dhammaan inta jeer ee la isticmaalay ay horay u soo saartay liiska sida hore loogu sheegay Source .